ရှနွန်ဘရစ်စ် ၊ အန်တိုနီတာဗာ တို့နဲ့ ထိုးသတ်ဖို့ တိုင်ဆန်ဖျူရီမျှော်မှန်းထား - FOX Sports Myanmar
ရှနွန်ဘရစ်စ် ၊ အန်တိုနီတာဗာ တို့နဲ့ ထိုးသတ်ဖို့ တိုင်ဆန်ဖျူရီမျှော်မှန်းထား
ဗြိတိန်လက်ဝှေ့ကစားသမား တိုင်ဆန်ဖျူရီက သူ့အနေနဲ့ ရှနွန်ဘရစ်စ် ၊ အန်တိုနီယိုတာဗာ အစရှိတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ထိုးသတ်ဖို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုချင်ပေမယ့်လည်း အဆိုပါကစားသမား (၂)ဦးစလုံးဟာ သူ့ရဲ့ တစ်ကျော့ပြန်ထုိုးသတ်မှုမှာ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနုိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
တိုင်ဆန်ဖျူရီဟာ ၂၀၁၅ နုိုဝင်ဘာတုန်းက ယူကရိန်းလက်ဝှေ့ကစားသမား ခလစ်စခို ကို အနို်င်ရရှိပြီးကတည်းက ပွဲတွေမထိုးသတ်တော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်ဆန်ဖျူရီဟာ လက်ဝှေ့လောကမှာ ဘာမှ လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့တာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကပဲ Ring Magazine ကပေးအပ်တဲ့ ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဆုကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါ တယ်။
Great run with the boys this morning weight coming downatreat, boxing like the legend I am, THE WORLD IS MINE! @MTKGlobal I’m on this ting?? pic.twitter.com/PWgEgK37nw
IBF , WBA စူပါဝိတ်တန်း , WBO ချန်ပီယံကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဖျူရီဟာ မကြာ သေးခင်ကပဲ ဘန်ဒေဗစ်ဆင်ကို နည်းပြသစ်အဖြစ် ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကာ လက်ဝှေ့လောကထဲ ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပြီး အန်တိုနီယိုတာဗာနဲ့ ရှနွန်ဘရစ်စ် တို့ ကို စိန်ခေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာနေ့က တွစ်တာစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ဖျူရီကပြောကြားရာမှာ – “ ပထမဆုံး ရှနွန် ကို ပြောချင်ပါတယ်။ ထိုးသတ်ဖုို့ စိန်ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ သူ့ဆီကို စာချုပ်တစ်စောင် ပို့လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါဆိုရင် အားလုံးတိတိကျကျဖြစ်လာပြီး သူလည်း လေ့ကျင့်ဖို့ ရအောင်လို့ပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုထိန်းထားပါ။ သန်မာအောင်လုပ်ထားပါ။ ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါ။ တကယ်လို့ သူစိတ်ပါတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့ဆီလာပြီး ထရိန်နင်အတူလုပ်လုို့ရပါသေးတယ်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အတူလုပ်ကြတာပေါ့။ မကြာခင်စာချုပ်တစ်စောင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ” လုို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်တစ်ရပ်မှာလည်း ဖျူရီက ရှနွန် (သို့) တာဗာ နဲ့ထိုးသတ်ဖို့ ၀မ်းမြောက်စွာမျှော်လင့် နေကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ခင်ဗျားတုို့ကို ကျွန်တော်တစ်ခုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်။ ရှနွန်ကိုမထိုးခင် စာချုပ် တစ်စောင်ပို့လိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကျွန်တော်နဲ့ထိုးလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဘက်က ထိုးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ သူ့ကိုစာချုပ်မှာလက်မှတ် ထိုးဖို့ကမ်းလှမ်းမှာပါ။ အန်တိုနီယိုတာဗာကိုလည်း ဒီလိုပဲ စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းမှာပါ။ ရှနွန် ခင်ဗျားဆီ စာချုပ်တစ်စောင်လှမ်းပို့လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ကျော့ပြန်ပွဲစဉ် အဖြစ် မမှတ်လိုက်ပါနဲ့ဦး ။ လေ့ကျင့်ထားပါ။ အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ ” လို့  ဖျူရီက တွစ်တာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Home Combat Sports ရှနွန်ဘရစ်စ် ၊ အန်တိုနီတာဗာ တို့နဲ့ ထိုးသတ်ဖို့ တိုင်ဆန်ဖျူရီမျှော်မှန်းထား